Japan: Eritreritra manodidina ny fahelana velona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2010 21:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, polski, English
Amin'ny maha-firenena mora antitra azy indrindra manerana izao tontolo izao ankoatra ny fananany taha-pahavelomana avo indrindra, Mila mieritreritra momba ny hatsaram-piainana sy fiaraha-monina mahatsangy no ary indray i Japan. Na izany dia vitsy ihany no mandinika ny momba io amin'ny tsirairay avy. Ao amin'ny lahatsoratra manao hoe (Mety ho loza) ny fahelana velona (長生きはリスクである), ny mpamaham-bolongana Satonao no mizara ny fomba fijeriny manokana fa angamba tsy tokony hankalazaina izany fahelana velona izany.
Naoty: nahazoana alalana tamin'ny mpamaham-bolongana ny fandikana ny lahatsoratra iray manontolo. Ny rohy rehetra kosa dia nampian'i Tomomi Sasaki ho (fampitahana).
Vao haingana aho no nitari-dresaka tamin'ny olona isan-karazany miresaka ny “mahamety ho loza (risque) ny fahelana velona”.
Angamba noho ireo namako akaiky ahy miditra amin'ny fahatelopolo sy fahaefapolo taonany ary reko matetika ny tantara izay mitambesatra ao an-trano: Trotraka ravehivavy noho ny fikarakarany ny ray aman-dreniny, Mitety ny hopitaly isan-karazany noho ny homamiadana ny rainy, na misy voa ny sain'ny reniny ka mila fikarakarana mandritra ny andro manontolo. Ny faratampony amin'izany, tsy nisy fitomboana ny karama ary kely ny vola am-pelatanana. Samy manana ny ahiahiny sy ny olany ny tsirairay. Maro amin'ireo itambesarany no mety hanao fehinteny hoe “tsy midika avy hatrany ho fahasambarana ny fahelana velona”. Efa ela no nanjaka tamin'ny vahoaka japoney izany fomba fiheverana mametraka fa mizotra ho amin'ny fahasambarana izany hoe lava velona izany. Azo heverina fa ilaina ovaina izany fomba fiheverana izay miraikitra ao an-dohantsika hatramin'ny vanim-potoanan'ny Showa izany.
Misy olom-pantatra nahatratra ny faha-70 taonany izay moa no nanomboka “namono tena tsikelikely”.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia indro olona iray, izay niaina salama tanaty fifehezan-tena (fifadiana), no nanomboka nanao izay rehetra tiany atao, ary anatin'izany ny zavatra tsy nataony intsony satria heverina hoe “ratsy ho anao”. Mety hitera-doza ny miaina lava loatra. Ny lalan-kevitra dia izao: Tsy aleo ve manao izay tianao atao, tsy mieritreritra hoe mety ho faty vetivety ianao, toy izay hoe ela velona (fotsiny)?
Sahirana loatra aho tamin'ity volana ity ka nanadino nanolokolo ny vatako.
Na dia misy aza ela velona nefa arahi-maso matetika ny fahasalamana na mitari-dalana ‘hamonjy’ olona iray izay manao zavatra tafahoatra, mety ho misy tratran'ny tsy ampy kely, lasa sakaizam-pandriana na taizan'aretina amin'ny farany. Maharary avoko izany rehetra izany ary mety ho lasa enta-mavesatra ho an'ny ankizy. Eto dia ilaina ny mandanjalanja ny fifehezana sy ny zava-tafahoatra satria tsy tokony hamaivanina ny fahasalamana. Manomboka izao kosa aho dia te-hanala ny eritreritra hoe “fahasambarana ny fahelana velona. Tsy midika avy hatrany fa sambatra izay ela velona. Iaino amin'ny fotoany ny fiainana ary rehefa tonga ny andro, dia aoka ho faty amim-pahamendrehana. Izay no tiako ahatongavana. Milamina ny zavatra ataoko ary ataoko fanazarana ao an-tsaiko fa mety ho androany ny farany, fa ny tena mila jerena dia ny hoe ahoana ny fomba ahafatesana. Mivandravandra amin'izany fa sarotra ny raharaha.
Mariho tsara azafady fa tsy manazava momba ny antony nahaterahana na momba ny fiainana aho eto. Tsy miresaka momba ny famonoan-tena ihany koa aho amin'izany. Miresaka momba ny fomba tsara andraisana ny fiafaran'ny fiainana aho. Ny fieritreretana ny fomba ahafatesan'ny olona iray no ieritreretana ny fomba iainana. Te-hieritreritra amin'ny fomba manokana sy hentitra aho ny momba ny fahaiza-mandray ny fahagagan'ny fiainana raha mahasahy mandray tsara ny fahafatesana izay tsy maintsy hodiavintsika tsirairay avy.
Tadidio, fiainana lava sy miroborobo izany.
Vakiteny mifandraika aminy: Japan: Momus, eto amin'ity firenena miha-antitra ity
17 Septambra 2021Azia Atsinanana